Blackberry Navajo: nkọwa nke ụdị dị iche iche na njiri mara na nyocha, ọkachasị ihe ọkụkụ na itolite ma lekọta, foto - Osisi - 2020
Blackberry Navajo - nkọwa dị iche iche, njirimara, akuku na nlekọta osisi
N'usoro nke uto, bara uru Njirimara nke tomato na undemanding elekọta blackberry adịghị ala, na ọtụtụ ụzọ ọbụna karịa ya ikwu utu. Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị na-azụ nwa agbaala ọtụtụ ụdị enweghị ihe ọ bụla, nke bụ uru doro anya ọdịbendị. Otu n'ime ụdị ndị a - Navajo - ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ ugbo nke Mahadum Arkansas gbara ya gburugburu. Ugbu a, ọ bụ ihe na-ewu ewu ọ bụghị naanị n'etiti ndị na-amu amu America, ọ bụ ndị bi na Russia n'oge okpomọkụ na-ahọrọ ya.
Blackberry Navajo: nkọwa na njiri mara nke ọtụtụ
Blackberry bụ ihe ọkụkụ na-arụpụta ihe. O toro site na obi uto ma n'usoro ulo oru ma na ulo ulo gburugburu uwa. Naanị ihe ndọghachi azụ dị n’ubi ahụ bụ nnukwu ogwu. Otu ọrụ nke ndị ọkà mmụta sayensị-ndị na-ahụ maka Mahadum Arkansas bụ mmepe nke ngwakọ ọhụrụ na-enweghị spikes. Ndị a gụnyere ụdị Navajo dị iche iche nwetara na ngwụsị 80s nke narị afọ gara aga.
Tomato nke blackberry Navajo adịghị nnukwu, ibu ha sitere na 4 ruo 7 g
Tụnyere ndị ọzọ blackberry iche na adọ ụdị, tomato Navajo adịghị oke ibu, ibu ha sitere na 4 ruo 7 g. Agbanyeghị, ọ bụghị mkpụrụ osisi buru oke ibu na-akwụghachi ụgwọ site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkpụrụ osisi nke na-eto na otu ohia. Ná nkezi, ọnụ ọgụgụ ha ruru ihe dị ka narị ise.
Navajo bụ aha agbụrụ ndị India. Achịkọbara adọba aha nke usoro blackberry, nke pụtara n'ihi nsụkọ site n'aka ndị ọkachamara si steeti Arkansas, natara aha ha iji sọpụrụ agbụrụ ndị India. N'ime ha nwere ike ịkọwa ụdị Arapaho, Chiroki, Apache na ndị ọzọ.
Ome ojii nke Navajo toro ogologo. N'ịdị elu ha gafere 1.5 m. Oge ịgbatị ruo otu ọnwa, mkpụrụ osisi chara n'onwe August - mmalite Septemba. Ahịhịa na-enweghị ogwu, yabụ nchịkọta akwụkwọ ntuziaka dị mfe na enweghi mgbu. Tomato dị mma maka oriri ọhụụ, maka kefriza ma ọ bụ maka ịme jam, pies, ihe ọ drinksụ andụ na ihe ndị ọzọ.
Ka oge na-aga, a na-eji mkpụrụ osisi peva nke ojii Blackberry Navajo ejupụta
Tebụl: Njirimara Navajo Blackberry
Ihe ngosiputa Nkọwa
Uka beri 4-5 g, mkpụrụ osisi nke ọ bụla ruru 7 g
Ọdịdị nke tomato Nwa ebu n’afọ
Ringgba agba Nwa
Ire Obere oge dị ụtọ, 4 isi 5 n'ime 5 dabere na ntanetị uto ahụ
Tebụl: Uru na ọghọm dị na Navajo Blackberry
Ime omumu nke onwe (anaghi acho pollin). Ihe ngwakọ na-achọ anyanwụ na okpomọkụ.
Product nwere ike nweta oke 6 n'arọ site na ọhịa. Mmepụta a na-ada n'okpuru ọnọdụ ihu igwe dị njọ (iru mmiri dị elu, obere ikuku ikuku).
Magburu ibu transportability nke tomato. Azụmaahịa na uto na-ewe ihe dịka ụbọchị ise. Rootmụ nwanne ji ọtụtụ.
Vidiyo: nyocha nke ụdị blackberry Navajo, Black Satin, Karaka Black, Ruben
Blackberry Navajo na-apụ maka ilekọta, mana a ka ga-akụ ya dịka iwu niile si dị. Ọ bụrụ n’ịhọrọ ebe kachasị mma ma ifatilaiza n’oge ihe ọkụkụ, ihe ọkụkụ ahụ ga-ewetara ndị nwe ya ihe ubi na-esi ísì ụtọ kwa afọ.
Mgbe ị na-ahọrọ ọnọdụ nke blackberry na saịtị, ndị na-elekọta ubi kwesịrị iji ụfọdụ akụkụ nke ọdịbendị duzie ha. Blackberry bụ osisi na-ahụ n'anya, yabụ na-atụ aro ịhọrọ ebe anwụ na-acha maka ya. Ọ na-eto nke ọma na ndo ele mmadụ anya n'ihu, ma n'enweghị ìhè anyanwụ, tomato ga-eto obere ma Ome ga-agbatị.
A na-atụ aro ka blakberị kụrụ n'usoro n'usoro anwụ na-acha
Okwesiri iburu n'uche na ihe ọkụkụ anaghị anabata oke mmiri. N'ebe a na-akụ ahịhịa nke blackberry, omimi nke ala mmiri kwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala 1 m, ma ọ bụghị ya, osisi ahụ nwere ike ịnwụ. A na-ewere blackberry dị ka ihe ọkụkụ na-akwụghị ụgwọ. Mpaghara kwesiri iku nkpuru nke osisi kwesiri ka echegide ya nke oma site na ntu oyi site na akuku.
N’adịghị ka ihe ọkụkụ ndị ọzọ a na-atụ aro ka a kụọ ka ọdịda, mkpụrụ osisi ojii na-akụ nke ọma ná mmalite oge opupu ihe ubi ka ikuku ndị na-eto eto ghara ifriizi n'oge oyi.
Ndị nwere ahụmahụ n’ubi na-enye ndụmọdụ ka ịkpụ mkpụrụ bịrịbịrị n’usoro n’oghere nke saịtị ahụ, na-esite n’oghere 1.5 m. A ga-ahapụrịrị ihe dị ka mita 1 n'agbata ahịrị ahụ, n'ihi na ndị Navajo cultivar nwere ikike ịkpụpụta nnukwu.
A na-akwadebe olulu maka ịkọ blackberries izu abụọ tupu ụbọchị a ga-atụ anya ya
A na-akwadebe olulu maka seedlings izu abụọ tupu ụbọchị a ga-atụ anya ịkụ. Gwupụta olulu nwere omimi na obosara nke ihe dị ka cm 40. A na-etinye mkpụrụ nri (elu oyi ala nke ụwa jikọtara ya na humus ma ọ bụ compost na ịnweta nri) na ala. A na-awunye ala na-enweghị fatịlaịza na ya ka mgbọrọgwụ nke mkpụrụ osisi ahụ ghara 'nkụ.'
Nzọụkwụ nke-usoro maka ịtọ blackberry
Ghaa ụwa n'olulu a kwadebere nke ọma.
Debe seedling n'etiti ma gbasaa mgbọrọgwụ.
Wụsa usoro mgbọrọgwụ ya na ala ka uto toro dị na isi nke oge ịse bụ ihe na-erughị 2-3 cm.
Akụrụ na-eto eto kwesịrị ịdị omimi 2-3 cm
Gburugburu seedlings, mee oghere, moisten na mulch na humus ma ọ bụ sawdust rotted.
Blackberries na-enye otutu nke tojuru ma nwekwaa ike ijide ókèala dị nso na obere oge, yabụ, ịgha mkpụrụ ga-amachicharịrị site na igwu mpempe akwụkwọ n'akụkụ ya, a ga-eme nke a ọ bụghị naanị site n'akụkụ gị, kamakwa na-esote ngere.
Gbọala ihe akudoro akuku ohia ọ bụla, nke ị ga-ejikọtakwa osisi blackberry. Ma ọ bụ mee trellis site na-egwu ala na posts n'akụkụ nke ahịrị wee dọpụta waya abụọ nke waya dị elu nke 50 cm 1 mita site na ala.
Blackberry Ome dị elu, yabụ ha chọrọ nkwado
Teknụzụ na-akọ ugbo nke ahịhịa ojii Navajo agbakọbeghị ọnụ. Ọ bụrụ na ị kụrụ osisi ahụ dabere na nkwenye ahụ, mgbe ahụ n'afọ na-esote afọ mbụ tomato ga-apụta, na afọ nke ise na osisi Navajo ga-enye mkpụrụ kachasị ukwuu. Isi ọrụ nke onye na-elekọta ubi mgbe ị na-eto ihe ubi ga-abụ ntughari nke bushes, ịgbara mmiri na nkwadebe maka oge oyi.
Blackberry bụ osisi unwu na-anagide ihe ọma, mana ọ chọrọ mmiri mmiri n'oge ohia na ịmị mkpụrụ. A ga-awunye lita 10 mmiri n'okpuru ọhịa ọ bụla ma ọ bụrụ na mmiri ezoghị n'oge a. Mara na blackberry anabataghị oke mmiri.
Blakberị na-arụsi ọrụ ike na-etolite Ome, nke na-ebuwanye ibu ma na-egbochi guzobe tomato. N'ihi njirimara nke ọdịbendị a, bushes kwesịrị ịmalite ịkwachaa site na afọ nke abụọ mgbe ịghasịrị. Enwere ọtụtụ ụzọ iji mepụta bushes blackberry - oke nke mmadụ ga-eji dabere na ọnọdụ nke ihe ọkụkụ ahụ na ihe ndị nwe ubi chọrọ.
Ahịhịa ojii na-enye ọtụtụ nju, yabụ, a ga-ebipụ ọhịa a kwa afọ
Kwachaa ihe a na eme. Bee nku ya niile n’azu na n’azu oke ohia. N'akụkụ nke ọ bụla, a na-ahapụ ome 3 mkpụrụ, na etiti, a na-ebipụ ndị ochie niile, na-ahapụ 3-4 ọhụrụ.
Site na usoro a, a na-edobe ome na-amị mkpụrụ n'akụkụ waya ahụ, a na-ebipụkwa mkpisi niile na-etolite na mpụga ahịrị kpamkpam. Ome ọhụrụ 3-4 ka ahapụ n'etiti ohia.
A na-eji ebili mmiri na-aga n'ihu iyi ya na tomato, ndị na-eto eto na-emejupụta nke abụọ. Mgbe mkpụrụ osisi gasịchara, a ga-ewepụsị ahịrị nke mbụ, na ome ọhụrụ ga-abụ alaka na-amị mkpụrụ maka afọ na-esote.
Cingtọba mkpụrụ osisi na-eto ma na-amị mkpụrụ dị iche iche na-eme ka elekọta osisi na owuwe ihe ubi belata.
Na-akwadebe maka oge oyi
Blackberry Navajo bụ ihe ọkụkụ. A ga-ejikọtara ya mgbe a mịrị akwukwo. Ọ na-atụ aro ka ikpuchi elu sitere n’elu ya na alaka osisi ma ọ bụ akụrụngwa na-abụghị nke a kpara akpa.
Buru n’uche na ome ojii na-emebi emebi ma nwee ike ịgbawa ọsọ ọsọ mgbe agbada n’ala.
Gardenersfọdụ ndị na-elekọta ahịhịa na-enye ndụmọdụ ịtọgbọ blakberị na ala na trellis. Iji mee nke a, a na-ewepụ ogidi ndị ahụ n’ala ma tinyekọta ya na Ome. Usoro a na - enyere gị aka ichekwa ihe irighiri ahịhịa site na mmebi.
Vidio: Atụmatụ Nlekọ ojii
Banyere pests na ọrịa
A na-ekwuputa ụdị nhọrọ dị iche iche nke ndị America, gụnyere Navajo dị ka ndị na-eguzogide ọgwụ na ọrịa blackberry nkịtị. Ọbụnadị aphids na ihe na-egbu egbu na-emebi ha nke ukwuu. Ma, ọ gaghị abụ ihe atụ nke icheta ọrịa na ụmụ ahụhụ na-akpaghasị ọdịbendị ahụ.
Tebụl: Ọrịa blackberry na-akụ mkpụrụ ahịhịa
Pesti / ọrịa Otu esi amata Otu esi agha ọgụ Mgbe ị ga-emeso ọgwụ ọjọọ
akwụkwọ nke ụmụ ahụhụ na-amịpụta edo edo, na-ada na etiti oge;
mkpụrụ belata nke tomato;
uto nke Ome mbelata.
Iji hazie ụkwara, galik ma ọ bụ yabasị bee na mgbakwunye nke ncha akwa. Jiri nkeji asaa wee nwee ike ịgwọ ọtụtụ ọgwụgwọ. Ke akpa ihe ịrịba ama nke pests.
Blackberry akara Mkpụrụ osisi ndị tomato dị na-emebi emebi.
oghere na-apụta na oghere ahịhịa na ovaries;
na tomato adiahade.
Jiri Actellik ma ọ bụ Fufanon ghaa bushes ahụ (a na-eme ihe ngwọta dịka ntuziaka ahụ si dị). Wepụta 2 sprays na nkeji nke 10 ụbọchị.
Tupu okooko amalite.
N'oge mgbasa nke buds.
Septoria Akara ọcha ma ọ bụ nke nwere agba aja aja nwere ókè odo odo na-apụta na oghere akwukwo. Wụsa gooseberries na mmiri 1% Bordeaux (2-3 lita kwa ọhịa).
Ke ama ekebe.
Powdery mildew A na-acha ọcha mkpuchi na-apụta na mpempe akwụkwọ, petioles, ovaries, tomato. Wụsaa bushes na mmiri ọkụ (2-4 lita kwa ohia). Ozugbo snow agbazere n'isi mmalite oge opupu ihe ubi.
Fesa na Oxychol fungicide, Vectra, Fundazole (lita 1-2.5 kwa ohia).
Mgbe ekekọta tomato.
Anthracnose Obere aja aja na-apụta na epupụta. Akwụkwọ ahịhịa na-amacha agba aja aja na-agba aja aja, na-agbacha ma daa. Fesa ohia na ala n'okpuru ya na ihe ngwọta nke ọgwụ Skor (20 ml kwa 10 lita mmiri).
Iji gbochie mgbasa nke ọrịa na ọrịa, na njedebe nke oge a na-eto eto, a ga-ebipụ ma gbaa alaka ndị ahụ mere ka ọ bụrụ nke ọma, tinyere alaka ndị ọrịa na-emebi n'ụzọ dị ukwuu.
Foto osisi: Ọrịa na Ọrịa Blackberry
Oyi ahihia na akwukwo osisi blackberry - ihe nnabata nke septoria
Mgbe oria anthracnose, aja aja tụrụ na-akụ
Powdery mildew ọrịa dị mfe ịchọpụta site na njirimara na-acha ọcha
Utu bibi bushes na-eduga ná ọnwụ nke ihe ọkụkụ
Mgbe ọnya ọnya na-emebi osisi, akwụkwọ ya na-ada ma daa
Nyocha banyere Navajo Blackberry
Blackberries m na-akụ Thornfrey na mmiri na mmiri na Navajo kụrụ onye nke a nyere buds. Nwere ike ugbua oge ntoju, m hụrụ ha na nke ikpeazụ na Sọnde. Thornfrey nyere osisi gbara agba, di ha gbuela ọtọ ma jiri ihe eji osisi rụọ ya. Ka osi di, ha buliri elu. Ọ bụrụ na nke akpọrọ Yakimov anaghị emegharị ya, m ga-agwa di m ka ọ gụgharịa usoro a. Ana m eche na oge opupu ihe ubi si Navajo, m nwekwara ike idozi ya. Na Navaja na-adịghị ike, a ga-ebipụ buds, mana m chọrọ ịnwale. Mmiri na-ezo nke ukwuu, humus etinye n'okpuru ya, enwere m olileanya na ọ ga - emepụta ụfọdụ tomato, ma mmepe na nkwadebe maka oge oyi.
Dị mma nke ukwuu na Navajo - dị ụtọ, na ọbụna bry ahụ, nke ka jisiri ike. Na nkenke, beri dị oke.
Enwere m akara mmụta 2 - Navajo na Thornfrey. Ha abụọ abịaghị n'oge. Fruiting site na njedebe nke August na ọ fọrọ nke nta niile nke September. Mkpụrụ nke ukwuu. Kpoo nke ọma. N'oge opupu ihe ubi, m na-ekekọta trellis. Eji m spanbond kpuchie ya.
Navajo bụ kumanika nwere ezigbo mkpụrụ, beri na-atọ ụtọ ugbu a na teknuzu teknụzụ, tolitere n'otu oge ahụ dị ka Thornfrey.
Ọrịa na-eguzogide dịgasị iche iche. Mkpụrụ osisi na July ruo August. Osisi beri buru ibu, na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ.
onye oru ugbo39
Mkpụrụ osisi beri nke Navajo adịghị ka mkpụrụ nke ọdịbendị ọdịnala ndị ọzọ, ma ihe ngosi a na-akwụghachi ụgwọ site na mkpụrụ na mma uto nke tomato. Na mgbakwunye, Ome ndị ahụ na-enweghị ntụpọ nwere ọdịdị ziri ezi, yabụ, nlekọta Navajo dị mfe ma nwee onye na-achọ ubi ga-enwe ike itolite ụdị ndị America.